Olee otú ike iMovie trailers on Mac
Trailers bụ obere version nke ihe dum nkiri. Ha nwere ike a olu n'elu narrating ma ọ bụ na-akọwa ihe nkiri ahụ. A a ụgbọala na-adọkpụ-ewe ihe 2-3 nkeji n'ihi na ha bụ nnọọ mkpụmkpụ nkwado videos. Anyị a ga-ewere a lee anya na otú ike trailers na iji ọrụ dị na iMovie.
Nkebi nke 1: Olee otú ike iMovie trailers
Olee otú ike iMovie trailers
Ẹkedori iMovie na pịa na ike bọtịnụ.
A oke nke trailers na dị ga-gosiri na ihuenyo, họrọ onye ọ bụla n'ime ka kwa gị mmasị.
Pịa na ndepụta taabụ iji tinye ọmụma dị otú ahụ dị ka utu aha, oge na ụbọchị nke ihe nkiri ahụ.
N'okpuru ebe ọ bụla ụgbọala na-adọkpụ, e nwere nkedo so ntinye.
Ugboro abụọ click na a ụgbọala na-adọkpụ iji họrọ ya.
Ozugbo ị gụsịrị abanye nkọwa nke ụgbọala na-adọkpụ, pịa na ịgbanwe icon na ala n'akụkụ aka ekpe na-eme ka ọ bụla mgbanwe.
iMovie na-akpaghị aka na-azọpụta trailers dị ka ị na-arụ ọrụ na ha.
Mgbe dechara, na-eche free ịkọrọ gị ụgbọala na-adọkpụ site ọkacha mmasị gị ọwa na YouTube.
Ọ bụrụ na ị anya gburugburu na internet, ị ga-ibu nke trailers ka na iji iMovie, ụfọdụ n'ime ha na-ezi na ndị ọzọ na-adịghị mma. Mgbe ahụ e nwere ihe ole na ole na-egwu. Anyị gbalịrị kasị mma anyị na-ewetara gị ụfọdụ trailers na n'ezie anya nnọọ nso ọkachamara nkiri trailers, niile ekele ịtụnanya ụgbọala na-adọkpụ atụmatụ nke iMovie. Ndị a trailers e mere ukwuu n'ime na-enwechaghị ahụmahụ-eji iPhone ma ọ bụ iPad.
Ego ha na ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ụdị nke nwere iMovie-enye gị mgbe ọ na-abịa na-eke video trailers nke gị onwe gị. Ị nwere ike mgbe ahụ mfe ịkọrọ gị vidiyo na ụwa.
Egwu, ụjọ ụgbọala na-adọkpụ na iMovie maka iPhone, nke a bụ ihe dị ịtụnanya ihe atụ nke otú ike a ngwá ọrụ iMovie bụ. Ị pụrụ ịhụ na n'agbanyeghị na ọ bụ a ụgbọala na-adọkpụ mere site na onye na-amu amu, ọ fọrọ nke nta anya dị ka ezigbo ihe. Ị ga-enwe ike ịhụ ụfọdụ fancy visual mmetụta dị ka nke ọma na ihu ke ụgbọala na-adọkpụ na-agbanwe agbanwe si mmadụ ghostly ọgụgụ.
Pịa na a njikọ ego ya - http://www.youtube.com/watch?v=P7IbzIyYPnc
Onye a na-egosi ihe ndị nkịtị di na nwunye na glimpses nke ha ihunanya njem. The iMovie ụgbọala na-adọkpụ isiokwu eji bụ apt maka ngosi nke obi ụtọ njem di na nwunye a na video agbaala; ụgbọala na-adọkpụ ya, e mewo ka iji a Nchikota mkpachị na photos. N'ozuzu, ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma iMovie trailers na ahụwo n'oge na-adịbeghị.
Pịa na a njikọ ego ya - https://www.youtube.com/watch?v=nlKQx_s_Mys
Ọ bụghị otú ahụ nkịtị cat
A na-akpa ọchị ụgbọala na-adọkpụ mere maka a Pita cat, onye a bụ a ga na-ekiri, nanị n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ya mere anya ini enye okụtde. Isiokwu eji bụ nnọọ ìhè na-akpa ọchị, bụ ezie na anyị kwenyesiri ike na Obere vidiyo gaara mma lit. Onye Okike nke a ụgbọala na-adọkpụ meworo ihe ịrịba ama ọrụ na ndepụta okwu N'ezie na na-eme ka onye a nke anyị mmasị iMovie trailers niile oge.
Pịa na a njikọ ego ya - https://www.youtube.com/watch?v=Vf6vRRVcmdc
Oké ụzọ gbaa a dike isiokwu ụgbọala na-adọkpụ, otu anya na a iMovie ụgbọala na-adọkpụ na ị na-agbụ na-ada na ịhụnanya na echiche nke na-eme ka otu maka gị kwa. The magburu onwe iMovie isiokwu eji na-eme nke a ụgbọala na-adọkpụ ga-emekwa ka i kwere na e nwere ihe ọzọ mgbe ụgbọala na-adọkpụ, ị maara, dị ka e mewo ka ọ maka ihe n'ezie fim ma ọ bụ ihe.
Pịa na a njikọ ego ya - https://www.youtube.com/watch?v=RGKNzCf_vmQ
Arụrụ n'ụlọ ụgbọala na-adọkpụ nledo isiokwu, onye a dị nnọọ apụ na-egosi otú ike iMovie bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụfọdụ serous trailers ọ bụ ezie na video akpan akpan iji na ịbụ a bit na-akpa ọchị ma ị ka pụrụ ịhụ nke ukwuu nke nwere na iMovie trailers na dị nnọọ nke a otu video.
Pịa na a njikọ ego ya - https://www.youtube.com/watch?v=wiEsmYRFB6U
Olee otú na-ebu ọnụ na-atụ na iMovie on Mac / iPad
Olee otú Jiri Uda welara na iMovie
> Resource> iMovie> Olee otú ike iMovie trailers on Mac